Fiidiyowga: Drew Madore oo ku saabsan sida "koofiyadda madow SEO" ay isu beddeshay sannadihii la soo dhaafay | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Fiidiyowga: Drew Madore oo ku saabsan sida "koofiyadda madow SEO" uu isbeddelay sannadihii la soo dhaafay
Qayb ka mid ah wareysiga aan la yeeshay Drew Madore, Maamulaha Guud iyo aasaasaha Synergist Digital Media, waxaan wax badan ka hadalnay "Koofiyadda madow SEO." Koofiyada Black SEO asal ahaan waa SEO oo aan waafaqsanayn tilmaamaha Google.
Waxaan ka hadalnay sida koofiyadda madow ee SEO ay isu beddeshay sannadihii la soo dhaafay. Sida sida qeexida koofiyadda madow ee SEO ay u noqotay mid ballaaran oo daboolaysa farsamooyin badan oo SEO ah oo laga yaabo in mar loo tixgeliyey xeelado la aqbali karo oo ku jira tilmaamaha maamulaha mareegaha Google. Taas, waxaan sidoo kale ka hadalnay sida qofku u isticmaali karo farsamooyinka noocan oo kale ah si badbaado leh (ie ha u isticmaalin goobaha macaamiisha) si loo tijaabiyo waxa shaqeynaya oo arag sida aad uga faa'iidaysan karto in ka badan "koofiyadaha cad" SEO.
Waa maxay sababta aysan suuqgeysyadu u dhayalsan karin qiimaha TikTok